I-Scalloped Amazambane Recipe - Ungadliwa
ungasenza kanjani isitolo esithengiwe i-pizza crust crispy
ibukeka kanjani i-tilapia ephekiwe
zingaki izinkomishi zelayisi elomile elilinganayo eliphekwe
I-Scalloped Amazambane Recipe
Amazambane ama-Scalloped ayindlela elula elula yakudala, ephelele isidlo sakho se-Easter, uKhisimusi, i-Thanksgiving noma ngisho nesidlo sangeSonto.
Kulesi sidlo esiseceleni, amazambane asikiwe kanye no-anyanisi agqinsiwe kusoso okhilimu owenziwe kalula futhi abhakwa kuze kube yithenda, igolide, nokubukeka. Ukuphelela kwamazambane!
Kuzo zonke izitsha eziseceleni zamazambane kusuka Amazambane Ayosiwe Ovini uku Amazambane Aphekwe Kahle , akukho okusho ukudla okududuzayo njengohlangothi olunokhilimu lwamazambane asikiwe (ngaphandle kwebhotela ebusayo amazambane abondiwe ).
ozokuhlinzeka ngesobho le-chicken tortilla
Ngakho-ke ayini amazambane ama-Scalloped? Kucatshangwa ukuthi yavela eNgilandi, igama elithi 'scallop' ngokuyisisekelo liyincazelo yokuthi amazambane asikiwe kanjani. Amazambane azacile futhi asikiwe ngendlela efanayo agqinsiwe esitsheni se-casserole abese embozwa ngosisi okhilimu othosiwe abhakwe. Umphumela walokhu iresiphi yamazambane enambitheka kamnandi!
Amazambane Amazambane egolide aseYukon (noma amazambane abomvu) anesikhumba esithambile futhi awadingi ukuxebulwa (abamba ukuma kwawo kahle). Amazambane e-Russet noma amazambane e-Idaho azosebenza kepha athanda ukwehlukana kakhulu (kepha aqhubeke ukunambitha okuhle).
Anyanisi U-anyanisi wengeza ukunambitheka okuningi kule recipe futhi uyisithako esijwayelekile. Sika ngokuncanyana.
I-Sauce Yokhilimu Usoso okhilimu osheshayo owenziwe ngofulawa, ibhotela, ubisi nomhluzi. Uma ungathanda ukwengeza ushizi, susa usoso emlilweni bese ugoqoza idlanzana noma amabili kashizi osikiwe. Izoncibilika ekushiseni kwesoso.
Isizini Izinongo ezilula kule recipe zifaka usawoti, upelepele, u-anyanisi, ugalikhi. Faka kuzintandokazi zakho kubandakanya i-thyme, irosemary, iparsley.
Indlela Yokwenza Amazambane Ama-Scalloped
Ukwenza amazambane ama-scalloped kusuka ekuqaleni kuthatha isikhathi kodwa kulula. Ngenkathi amazambane e-scalloped weqiniso engenawo ushizi, kwesinye isikhathi sifaka phakathi!
Hlanganisa amazambane no-anyanisi
Yenza usoso owenziwe ekhaya (iresiphi engezansi)
Ungqimba amazambane, anyanisi kanye nososo. Vala bese ubhaka.
Susa ucwecwe bese ubhaka okuthe xaxa, lesi sinyathelo sakha umphezulu onsundu omnandi kumazambane aqhekekile
OKUBALULEKILE Kulungile imizuzu engama-20 ngaphambi kokukhonza ukuvumela isoso ukuthi likhule.
Amathiphu amazambane aphelele aphekiwe
Sika amazambane ngokulinganayo ukuqinisekisa ukuthi amazambane aqhekekile apheka ngokulinganayo
Sebenzisa i- mandolin ukwenza lo msebenzi usheshe ngokwengeziwe (a $ 25 mandoline enjengale wenza umsebenzi omuhle futhi uzokongela isikhathi esiningi)
TO ujinja yisisekelo se- isoso esinokhilimu . I-roux isho ukupheka amafutha (kulokhu ibhotela) nofulawa bese ufaka uketshezi ukwenza usoso!
Uma uthatha isinqumo soku engeza ushizi kuya kusoso (okuzokwenza lokhu kungene Amazambane Au Gratin ) susa usoso esitofini ugovuze izinkomishi zikashizi eziyi-1/2 kuya kwezi-2 (i-cheddar / gruyere yizinqumo ezinhle).
Isikhathi sonyaka amazambane ngosawoti kanye nopelepele phakathi kwezendlalelo.
Mboza nge-foil ngenkathi ibhaka, lokhu kuyivumela ukuthi ishunqise namazambane wentando ngokushesha okukhulu.
Ukwenza amazambane ama-Scalloped ngaphambi kwesikhathi
Ukwenza lokhu ngaphambi kwesikhathi (nokuqhubeka upheka ngokushesha ngosuku lokuphaka) siwahlolile ngokubhaka kancane ngemiphumela emihle.
Bhaka isitsha simbozwe imizuzu engu-50-60.
Susa kuhhavini bese kupholile ngokuphelele kwikhawunta (zishiye zimboziwe, umusi uzosiza ukuqeda ukupheka).
Vala kahle futhi isiqandisi .
Ngosuku lokuphaka, susa efrijini okungenani imizuzu engama-30 ngaphambi kokubhaka. Bhaka wembula cishe imizuzu engama-35 noma kuze kube yilapho ushisa.
Ukupheka Okungaphezulu Kwamazambane Uzoyithanda
Amazambane abhakwe kabili - Yenza phambili & iqhwa!
Amazambane Ayosiwe Oven O Easy
Amaqebelengwane amazambane alayishiwe - Kuhle kakhulu okusalile.
Kabili amazambane abhakiwe amazambane Casserole
I-Cheesy Ham ne-Potato Casserole
Isobho lamazambane abhakiwe - Ukudla okulula kwamasonto onke
Isikhathi sokulungiselela25 imizuzu Isikhathi Sokupheka1 ihora amashumi amabili imizuzu Isikhathi sokuphumulaishumi nanhlanu imizuzu Isikhathi Esiphelele1 ihora Isine imizuzu Izinkonzo6 izinsizakalo UmbhaliUHolly Nilsson Amazambane ama-Scalloped yi-casserole ephelele yamazambane! Amazambane amathenda kusoso okhilimu o-anyanisi obhakwe ekupheleleni kwegolide. Phrinta Phina
▢¼ inkomishi ibhotela
▢1 enkulu u-anyanini kuqoshiwe
▢ezimbili ama-clove ugaliki igayiwe
▢¼ inkomishi ufulawa
▢ezimbili izinkomishi ubisi
▢1 inkomishi umhluzi wenkukhu
▢½ isipuni usawoti
▢¼ isipuni upelepele
▢3 amakhilogremu amazambane amhlophe lisikiwe cishe ngo-thick 'ubukhulu
Hlangisa i-oven iye ku-350˚F.
Ukwenza usoso, qhafaza ibhotela, u-anyanisi negalikhi ngokushisa okuphakathi okuphakathi. Pheka kuze kube yilapho u-anyanisi ethambile, cishe imizuzu emithathu. Faka ufulawa bese upheka imizuzu engu-1-2.
Nciphisa ukushisa kuye phansi. Hlanganisa ubisi nomhluzi. Engeza inani elincane ngesikhathi whisking ukushwaqa. Ingxube izoba obukhulu kakhulu, qhubeka ngokungeza uketshezi oluncane ngesikhathi ushayiza uze ubushelelezi.
Lapho nje wonke uketshezi selufakiwe, letha emathunjini ngomlilo ophakathi ngenkathi uqhubeka nokushaya. Faka usawoti kanye nopelepele bese ubilisa umzuzu owodwa.
Gcoba isitsha sokubhaka esingu-9'x13 '. Faka ⅓ wamazambane ngezansi bese uwafaka ngosawoti nopelepele. Thela i-sauce yesikhilimu ngaphezulu.
Phinda izendlalelo ezigcina ngosawoti kakhilimu. Vala bese ubhake imizuzu engama-45.
Vula bese ubhaka okwemizuzu engama-35-45 eyengeziwe noma kuze kube nsundu ngegolide namazambane athambile. Broela imizuzu engu-3-4 ukuthola i-golden top.
Vumela ukuphumula imizuzu engu-15 ngaphambi kokuphaka.
Amakholori:286,Amakhabhohayidrethi:39g,Amaprotheni:9g,Amafutha:ishumi nanyeg,Amafutha agcwalisiwe:7g,Cholesterol:30mg,I-Sodium:484mg,Potassium:1122mg,Umucu:6g,Ushukela:5g,Uvithamini A:465IU,Uvithamini C:30.8mg,I-calcium:179mg,Insimbi:7.7mg
Igama elingukhiyeamazambane ama-scalloped InkamboSide Dish KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .
Uyini Umehluko Phakathi Kwamazambane Ama-Scalloped ne-Au Gratin?
Amazambane au Gratin abizwa nangokuthi amazambane amnandi ngoba isosi emhlophe empeleni ingu-sauce kashizi (futhi bavame ukuba noshizi ofafazwe phakathi kwezendlalelo kanye / noma isinkwa sokuthwebula).
Le iresiphi yamazambane e-scalloped ingafakwa ushizi noma ifakwe ushizi kodwa ngezinye izikhathi ngiyakuthanda ukulula kule recipe ngaphandle koshizi. Ubumnandi buka-anyanisi nobisi ukwengeza okuphelele kula mazambane asikiwe!
Ungawabamba Amazambane Ama-Scalloped?
Lawa mazambane azohlala esiqandisini izinsuku ezingaba zine bese evuselela kahle kwi-microwave, kuhhavini noma epanini lokuthosa! Uma ufuna ukuwaqandisa isikhathi eside, yebo, amazambane ama-scalloped angabanda!
Cishe noma yisiphi isidlo se-casserole singafriziwa ngokuphelele ngolwazi oluncane. Uma wenza isidlo sefriji, indlela engcono yokuqandisa amazambane ama-scalloped ukungawapheki ngokuphelele, kodwa uwashiye ephekwe kancane. Ngemuva kwalokho, uma sezipholile efrijini, zihlukanise ngendlela ofuna ukuyisonga ngayo bese uzigoqa ngokucophelela ngaphambi kokufaka ifriji. Ukuphinda uvuselele, mane uncibilikise futhi uqede ukupheka kuze kube yilapho amazambane esethenda futhi!
Yize leyo kuyindlela enhle, imvamisa sifuna ukufriza okusele. Kulokhu, la mazambane aqothuliwe afriza kahle, noma ngithola ukuthi kwesinye isikhathi ahlukana kancane lapho efudunyezwa kepha asanambitha kahle!
REPIN le Casserole Emnandi